Abavelisi abavelisi beHinge | Yongeza
Ikhaya > Iimveliso > Hinge
I-hinge iluncedo olufanelekileyo lwempahla yempahla yokudibanisa umnyango nomzimba wekhabhathi kunye nesakhelo sendlu kunye nesakhelo sebhali, esinokuvula ngokusemnyango kwiKhabhinethi kwaye idlala imilinde yesikhumba. Ungababona besebenzisa iingcango, iikhabhathi, iiwadi zewadi.
I-odod hinges lukhetho lwakho lobulumko. Isiqinisekiso sethu se-hinges siquka iintlobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo: ii-hinges, i-chings, i-hinges yentsimbi engafaniyo, efihlakeleyo, ibonelela ngeentlobo ngeempawu ezahlukeneyo zokudibana iimfuno zakho. Zonke iimveliso zethu ziye zavavanywa kwe-SGS ezingqongqo, kwaye i-hinge nganye iye yahlolwa ngokungqongqo.
Izinto zethu eziluhlaza ze-hinge zenziwa ngensimbi ekumgangatho ophezulu, intsimbi engenasigaba, kunye nezinye izinyithi, impatho yonyango egudileyo kwaye ilunge kakhulu, kwaye inganyangeki ityiwa kunye nenkungu. Ubugcisa obuhle bwenza i-hinge ivulekile kwaye ivale nangayiphi na i-angle kakhulu. Emva kwamashumi amawaka eeSwitches, isagudileyo kwaye ayinamathi.